Madaxweyne Muse Biixi Oo Diiday In Uu Cafis U Fidiyo Kornayl Caarre , Salaadiin Ayaa Jeediyay Codsigaas – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeSomalilandMadaxweyne Muse Biixi Oo Diiday In Uu Cafis U Fidiyo Kornayl Caarre , Salaadiin Ayaa Jeediyay Codsigaas
October 6, 2019 Ali Osman Somaliland, Wararka maanta 12
Ka dib kulan uu madaxweynaha Somaliland ee Muse Biixi uu la qaatay salaadiin iyo cuqaal reer Somaliland loogan hadlaay xaaladda Korneyl Caarre ayaa fashil ku dhamaaday
Korneyl Caare ayaa dhawaan ka goostay ciidamada Somaliland waxa ayna salaadiinta codsadeen in madaxweynaha uu cafis u fidiyo korneylka balse Muse Biixi waa uu ku gacan seeray arintaas
Korneylkaas ayaa sameystay jabhad ka dhan ah Somaliland ah balse madaxweynaha ayaa saamaxay kaliya jabhadda
BAAFIN BAAFIN BAAFIN
—————————————– Waxaan Halkan ka Baafinaya Wiilka Habar Awal ee Ahmed SNM oo halkan ku soo qori jirey in Jabhadda Kolonel Caare Xal loo helay oo la xalili doono.
Caqligi Awal Subeer ayuu meeshan ku soo qori jirey !!!
Suldaan Dabka salaan gobeed iga hano. War suldaan ninkaas aad baafisay adigaa murxiyay oo asagoo nool maqaarka ka dhiliyay markaa intuu magacaaga arkayo meesha waa ka war wareegayaa.
Waxaa is leeyahay mar kastoo uu madaxa soo gali is dhaho oo meesha kaa uriyo big buu ka dhahaa. Adiga iyo Suldaan Cawad baa idoorka malakal mowd ku noqday oo qiyaamahooda kiciyay suldaan. Isna waxaa leeyahay soo noqo adoo nabad ah waa lagu tabayee. Waxaa ugu daran mujrimkan Muuse Saamiri oo leh qof kaleetaan cafin karaa asagoo ibleyska ugu xun ah. Shiigii baa lagu jiraa walee.
Can La Ridey iyo Fanax waan idin salaamay.
Fanaxow meeshan meeshan rag hore oo shaaqiydadeyn jirey ayaa kabo la’aaniiga cararaye baabkaas ha isku furin sxb. Waxaad iodhaneyso raganimadaada iigu dheh. Laakiinse adoo nin kheyrkaa ah amaan is leh aniga afaaraheyga hasoo gelin. Nin kuu wax kusiiya waa la helaa, mid kula taliyase waa dhif iyo naadir.
Sxb, Muuse Biixi Subeer Awal wuu ka dhashey, laakiinse maanta waa Madaxweynaha dalka oo dhan. Sharcigana inuu dhowro ayuu meesha u joogaa. Somaliland oo dhana isku wado.
Arinta Jabhada Caarena sidaad arkeyseen intii ugu cusleyd waataasoo waa laga heshiiyay. Caarena imika waxa uu noqdey nin qudha. Nin qudhena qaran cidina u dumin meyso. Inta gaarka ah ee isaga khuseysana waa la dhameynayaa. Iyada oo soo gebogebowdeyna weynu arki doonaa Insha Allaah.
Maantase midbaad ka nasaneysaan adiga intii badneyd ee halkan qabiilka dadka u kala qoqobi jirey. Beenta iskaga wada dabo Mari jirey. Tororogta social mediaha lala fadhiyona dhegaha u raaricin jirey.
Midhkaasina waa inaanu jirin Qabiil Isaaq ka mid ah oo Somaliland diidani. Sidaanu doono aanu u xafiiltano dhexdayada kolkey timaado. Sidaanu doono aanu isku dacaayadeyno. Somaliland cidna, cid kale uma dabo fadhiisaneyso. Cidina cid kale uma xaqireyso. Cidina cid kale kama xigsaneyso. Sidaas maanta Caare cafiska loogu raadinayo ayaa dhab ah. Caare shaley markuu baxayay hadii ay cidi xitaa ka danbeysay oo ay is laheyd meelbaad ku gaadheysaan, maanta waakaasoo waa shakhsi qudha. Calafkiisa ayuu ka qaadi doonaa aakhirka.
Laakiinse waan ku aqaanaa oo kolba gidaar ayaad isku qaadi doontaa. Ana waxaan kuugu bishaareynayaa in gidaarkaad isku qaadidba uu xadiid kugu noqon doono.
Salaan sare horta Sxb
Waan ku faraxsanahay in aad soo noqotay adigo isleh Muuse Handaraab Difaac.
Laakin Ahmedow Sheekaddi kolonel Caare Fari kama qodna ciidankiisi waxay haystaan Meydh & Xiis
iyo xeebaha Isaaqu dego.
Ahmedow Somaliland markay ictiraaf u doonato Jubaland miyey kula qurux badan tahay ?
Ahmedow somaliland waxaad mooda in ay Ogadenka ictiraaf ka raadinayaan sababta waxay tahay waxa lagu yiri horta maamul goboleedyada soo mara in ay wax idiin ogolyihiin.
Somaliland waxay caawa hoos fadhida Ogaden/Reer Cabdulle/ Reer Warfa oy isleedahay bal hoosta ka bilaaba oo bal qabiilka somali ugu badan bal ha idin ictiraafto intu madoobe DFS ka cadhaysan yahay.
kkkkkkkkkkkkkkkkkk WAA HABEENKI XALAY OO TEGAY …………KKKKKKKKKKKKKKKKKK
Marqaan media waxba ka khaldan beryahan.
Waan Ku Faraxsanahay in aad soo Noqotay adigo isleh Muuse Handaraab Difaac, Laakin Ahmedow
Sheekadi kolonel Caare Fari kama Qodna ciidankiisii waxay haystaan Meydh & Xiis iyo Xeebaha Isaaqu Dego.
Ahmedow Somaliland markay ICTIRAAF u doonatay Jubaland miyaad leedahay xaalku waa wanaagsan yahay . Ahmedow somaliland waxaad mooda in ay Ogadenka ictiraaf ka raadinayaan sababta oo ah waxa lagu yiri horta maamul goboleedyada soo mara in ay wax idin ogolyihiin.
Somaliland waxay Caawa hoos Fadhida Ogaden/Reer Cabdulle/Reer Warfa oo ay isleeyihiin bal hoosta ka bilaaba oo bal qabiilka somali ugu badan ha idin ictiraafo intu Moodobe DFS ka cadhaysan yahay.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ”” WAA HABEENKI XALAY OO TEGAY ””” kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Marqaan browserkaan kasoo geli jirey beryahan oo dhan wuu iga xidhnaa. Imika waxey igu keliftey inaan mid wada xayaysiis ah kasoo galo. Kkkk dhibtu iney ku heysato adna waan arkaa. Waar show dee keliday maaha bahashu.
Waxa iigu kaa danbeysay adoo leh xaawaleyda ayaan Caare lagac uga soo ururiyaa. Kkkkkk Illaa iyo imika inteed ka ururisay? Runta sheeg sxb. Kkkk. Woxoogey yarse maka qanjuruufsatey illeyn isba waa nacabkaagoo geed hadhleh dhaawiciisa xitaa umaad jiideene? Kkkkk
Khaatumadaada haku seegin Caare waxba ma qaban karoo Dawladiisa iyo Dalkiisa Somaliland ayuu magan u yahaye. Kkkkk
Marqaan Media markaan ka soo galo Laptop wuu iga xidha, markaan ka soo galo Mobile kayga ama Tablet wuu ii ogolaadaa inkasto berigi hore Laptop wuu ii ogola.
Marqaan media waxa maamula Reer Mudug/Reer Gaalkacayood sababtaas bay isaga khariban tahay.